PSG Oo Haddaba Bilawday Raadinta Badalka Neymar Jr Iyo Kooxda Ay Duulaanka Ku Yihiin Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
PSG Oo Haddaba Bilawday Raadinta Badalka Neymar Jr Iyo Kooxda Ay Duulaanka Ku Yihiin Oo La Ogaaday.
Kooxda PSG ayaa hadda u muuqatay in ay qaadatay aragtida ah in mustaqbalka Neymar Jr uu yaalo meel ka baxsan Paris waxayna isku diyaarinaysaa in ay suuqa kala iibsiga ka raadsato badalkiisa si ay u helaan xidig tayo sare leh.
Maamulka kooxda PSG oo muddaba laba jeer si cad u sheegay in Neymar Jr uu kooxdooda ka bixi karo ayaa hadda bilaabay in ay helaan xidigii booska Neymar Jr buuxin lahaa ee weerarka kaga garab ciyaari lahaa Kylian Mbappe iyo Edinson Cavani.
Khilaafka Neymar Jr iyo maamulka kooxdiisa PSG ayaa u muuqda mid gaadhay heer aan la daawayn karin waxaana la filayaa in xidiga reer Brazil uu kaga dhabayn doono hamigiisa ah in uu dib ugu soo laabto Barcelona.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in kooxda PSG ay ka cadhaysan tahay qaabka ay Barcelona uga aamusan tahay arinta Neymar Jr iyada oo maamulka Bartomeu ay ciyaarayaan in marka hore ay isku daawadaan Neymar Jr oo shaqo joojin ku jira iyo maamulka kooxdiisa oo cadhaysan.
Waxayna maamulka Camp Nou doonayaan in ay PSG wada xaajood buuxa la bilaabaan waqtiga ay ku qasban yihiin in ay arinta Neymar xal u raadiyaan, waxaana hadda muuqata in maamulka PSG ay raadinayaan xidigii ay badalkiisa ka dhigan lahaayeen.
Wargayska Sport ayaa shaaciyay in maamulka kooxda PSG ay doonayaan in xidiga kooxda Manchester City iyo xulka qaranka Germany ee Leroy Sane uu noqdo badalka Neymar Jr.
Kooxda Bayern Munich ayaa tan iyo xagaagan ahayd kooxda sida xoogan loola xidhiidhinayay Leroy Sane kaas oo iska diiday in uu heshiis cusub u saxiixo Man City, waxayna hadda PSG duulaan ku tahay kooxaha Man City iyo Bayern Munich.
Leroy Sane oo ka mid ah ciyaartoyda tayada sare leh ee uu Guardiola ku haysto Etihad Stadium ayaa xili ciyaareedkii la soo dhaafay inta ugu badan kursiga kaydka ku qaatay maadaama oo ay ka horeeyeen Bernardo Silva iyo Raheem Sterling.
PSG ayaa saddex sano ka hor isku dayday in ay Leroy Sane la soo wareegto balse waxay ka mid ahayd kooxihii badnaa ee uu Guardiola ka hor qaaday xidiga reer Germany balse markan waxay doonayaan in ay xaalada uu ku jiro uga faa’iidaystaan si uu badalka Neymar ugu noqdo.
In haddaba ay PSG bilawday raadinta xidigii u buuxin lahaa booska Neymar Jr, waxaa loo arkaa in ay tahay arin muujinaysa sida ay maamulka PSG diyaar ugu yihiin in xidiga reer Brazil uu xagaagan kooxdooda ka baxo.
Neymar Jr ayaa la filayaa in uu waraysi dhinacyo badan taabanaya siin doono TV dalkiisa Brazil laga leeyahay taas oo keeni karta in ay soo dadajiso rabitaankiisa uu ku doonayo in uu Barca ku soo laabto.
Barcelona ayaa doonaysa in ayna markiiba isku dhex tuurin arinta Neymar iyo PSG waxayna ka muujinayaan taxadar badan halka ay dhinaca kale doonayaan in ay is dhaafiyaan arinta Griezmann oo la filayo in waqtiyada soo socda lacagta heshiiskiisa lagu burburin karo la bixin doono.